Vaovao mahafaly lohataona No. 6 - Fanorenana valisoa
Home Tsia. 6 Spring 2018
Tongasoa eto amin'ny fanontana Lohatenin'ny Lohataona No. 7 6. Manana tantara maro sy vaovao ho anao izahay. Tohizo ny famandrihana Twitter ara-potoana ary ny bilaogy isan-kerinandro ao amin'ny pejy fandraisana.
Ity sary avy amin'ny voninkazo kanto mahafinaritra eo amin'ny tampony ity dia nalaina tany Washington DC taoriana kelin'ny Global Summit nanatrika azy tany amin'ny voalohandohan'ny Aprily. Mahavariana fa nanana tosika kely tany Edinburgh izahay andro vitsy lasa izay.
Ny mpitsabo dia manamafy ny zavatra ahiahianay
Fihaonambe iraisam-pirenena 5th momba ny fitondran-tena
Fiaraha-miombon'antoka amin'ny famaranana ny Fihaonana ara-pahasalamana ara-nofo, Washington DC
Fampitandremana amin'ny pôrnôgrafia - “Fetiben'ny sarimihetsika” tsy miankina
Zavamaniry manga sy fonosana fonja
Facebook sy Youtube
Sex Addiction-vs-Porn Addiction, araka ny voarakitry ny BBC
Tsy isalasalana fa nandray ny fanamarihana avy amin'ny fikambanana maro izay mifandraika amin'ny fangatahana anao hiditra ao amin'ny tahirin-tsolitany ianao. Eny, raha te-hihaino hatrany ny The Reward Reward ianao dia mila mamaly ny fangatahana azonao avy amintsika amin'ny andro manaraka. Manantena izahay fa hanao izany ianao!
Nihazona ny voalohany tamin'ireo andian-dianay efatra tao amin'ny College of General Practitioners aho-dia nahazo fankasitrahana, iray andro atrikasa momba ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny aterineto momba ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana any Edinburgh amin'ity herinandro ity. Ireto telo manaraka ireto no hitranga London, Manchester ary Birmingham afaka andro vitsivitsy. Hatreto, ny GP tonga nanamafy izay noahiahiantsika - fa izy ireo dia nahita fitomboan'ny isan'ny tovolahy marary marary miaraka amin'ny fihenan'ny firaisana ara-nofo toy ny 'ejaculation tara' (matetika dia mpialoha lalana ny erectile tsy mety erectile), anorgasmia (tsy fahafaha-manao amin'ny orgasme) ary ny erectile erectile.
Izany dia nitranga tao anatin'izay taona vitsy lasa izay ary mifanipaka amin'ny fahazoana malalaka amin'ny pôrnôgrafia maimaim-poana amin'ny smartphones sy tablette. Mety misy ihany koa ireo antony hafa mampiroborobo, fa ny volanay ho an'ny mpamono tena lehibe dia vokatry ny fandefasam-peo amin'ny aterineto maimaim-poana.
Fantatry ny dokotera ihany koa fa ny Viagra sy ny fanafody fampitomboana fihenam-bidy, dia tsy miasa tsara amin'ny tranga maro mba hanamaivanana ilay olana. Ny antony tsy ampiasan'izy ireo dia ny hoe "tsy ambany ny fehikibo" ilay olana, izany hoe ny rà mandriaka ho an'ny taova indrindra amin'ny taovan'olombelona, ​​fa ny momba ny fanakorontanana ny fanasitranana nerveure avy amin'ny atidoha "amin'ny akondro". Raha tsy nahita ny lahatenin'i TEDx nalain'i Gary Wilson tao amin'ny "The Great Porn Experiment" momba izany, dia jereo io Eto.
Ny zavatra ianaran'ireo mpitsabo amin'ny fahasalamana dia avy amin'ny fikarohana tsy mitsaha-mitombo, sy ny fahagagany mamoafady-mianatra Ny dysfunction erectile dia 'zavatra', ary samy hafa amin'ny valin'ny dysfunction erectile mifandray amin'ny lehilahy zokiolona. izany lahatsoratra manazava ny fahasamihafana. Ity koa misy fampahafantarana eo am-piandohan'ny ED miaraka amin'ny fanohanana ara-tsiansa maro.
Manorata azafady ny atrikasa sisa tavela raha toa ka misy fotoana fohy ianao na mamela ny mpiara-miasa aminao. Hisy dokam-barotra ho avy tsy ho ela amin'ny faran'ny 2018.
Ny tale jeneralin'ny Mary Sharpe dia nanasa ny Filohan'ny Lucy Cavendish College, Cambridge, Jackie Ashley ( mpiambina mpanao gazety sady vadin'ny mpampita hafatra politika Andrew Marr) mba hiresaka momba ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny aterineto ao amin'ny atidoha adolantsa amin'ny alakamisy 7th Jona 2018. jereo Eto ho an'ny antsipirihany bebe kokoa. Hetsika maimaim-poana izany. Avia, azonao atao.
5th Fihaonambe iraisam-pirenena momba ny fihenan'ny fitondran-tena
Ny Fondation Reward dia faly tamin'ny fanombohana ny lahateniny tamin'ny lahateny Fihaonan'ny ICBA atao any Cologne, Alemana 23-25 ​​aprily. Ny ICBA dia mitondra ny mpahay siansa sy psikology ambony eran'izao tontolo izao hanehoana ny fikarohana farany momba ny fiankinan-doha amin'ny fitondran-tena. Ny hetsika TED dia mihinana ny fonao! Io no toerana hahitana ny tena hetsika farany. Profesora Stark dia nanao lahateny lehibe iray namintina ny tontolon'ny fikarohana siantifika momba ny vokatry ny fampiasana sary vetaveta. Masterclass tena izy io.
Darryl Mead nanolotra ny asa soa ho an'ny fifandraisana amin'ny daholobe ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny aterineto amin'izao fotoana izao. Izy dia niresaka momba ny drafitr'asam-piankohonan'ny evolisiona any an-tsekoly, atrikasa ho an'ny matihanina amin'ny sehatry ny fahasalamana, mpisolovava, mpiasam-panjakana sy mpampianatra ary amin'ny fanaovana asa ho an'ny mpahay siansa ho an'ireo izay mila izany. Anisan'izany ny famerenana ny lahatsoratra momba ny siantifika momba ny pôrnôgrafia amin'ny aterineto tamin'ny fihaonan'ny ICBA tamin'ny taona lasa teo amin'ny Isiraely.
Raha liana amin'ity taratasy fanadihadiana ity ianao dia afaka manome anao rohy ahafahanao mamoaka ilay taratasy avy amin'ny mpamosavy. Ny fifanarahana momba ny famoahana dia mamela malalaka ny kopia maimaim-poana azo atao. Manantena izahay fa hamoaka fanavaozana vaovao miorina amin'ny rakitsary ao amin'ny 2018 taty aoriana tamin'ny taona tao amin'ny diariny Fanampiana ara-pananahana sy fanerena.
Raha mpitsabo ianao na tsy liana amin'ny fampiasana ny filan'ny pôrnôgrafia, dia mety hahita sanda amin'ny fitaovana vaovao antsoina hoe The Short Pornography Screener. Anisan'ny harena navoaka tamin'ity taona ity ny fihaonan'ny ICBA. Nandritra ny taona lasa izahay dia nanome toro-hevitra ho an'ny mpandrindra lava lava kokoa Mora ampiasaina ny sary vetaveta misy fanontaniana 18, fa ity fitaovana vaovao ity dia manana dimy fotsiny. The Pôrnôgrafia vetaveta mihevitra ny ho fandrosoana manan-danja amin'ny fanomezana ireo dokotera Jeneraly fitaovana iray izay haingana dia haingana ho an'ny fampiasana azy ao anatin'ny fanendrena NHS.
Faly izahay fa afaka mandray anjara amin'ity zava-mahagaga ity Global Summit miaraka amin'ny mpikatroka 600 sy ny academics avy amin'ireo andrim-panjakana manan-danja manerana izao tontolo izao. Lasa mivantana ao amin'ny Facebook ny lahateny ary mbola hita ao amin'ny aterineto. Azonao atao ny mandre mpampianatra Gail Dines, mpanorina ny Culture Reframed * hazavao ny fahasamihafanaeo anelanelan'ny fiarahamonim-behivavy sy ny feminista liberaly, ilay antikon'ny adim-poko taloha, izay manohana ny vetaveta.
Azonao atao ihany koa ny mihaino ny tantaran'ny reny iray feno reny iray izay ny zanany vavy 15-taona dia navoakan'ny tovovavy 15 iray hafa, nalaina an-keriny ary navoaka tamin'ny andro 21 taona tao amin'ny Backpage.com, tranonkala ho an'ny firaisana mpiasa, ny ankamaroany dia niharan'ny fanondranana olona. Nolavin'ny lehilahy maromaro talohan'ny nahafantaran'ny mpaka sary azy fa nifandray tamin'ny polisy ny reniny ary nanampy azy ireo. Navelan'ny fianakaviana haka ireo tapany miaraka amin'ny zanakavavy iray izay tsy mbola niatrika olana mihitsy teo aloha ary efa mpianatra mpianatra tsara. Nisongadina izy Jane Doe (laharana faha-3) horonantsary fanadihadiana momba ny fanondranana olona an-tsokosoko.
Notohizan'ny raharaha ihany koa izahay. Nanamora ny fivoriana momba ny pôrnôgrafia sy ny paikadim-pahasalamana ho an'ny daholobe izahay miaraka amin'ireo mpandray anjara manodidina ny 50 manerantany hizaha fomba samihafa sy hizarana hevitra momba ny fomba fanao tsara indrindra. Nanangona fampahalalana mahasoa sasany izay napetrakay tamina tatitra ho an'ny fikambanana NCOSE iray manontolo izahay. Nanolotra taratasy mampiseho fomba fanao amin'ny fampitandremana momba ny fahasalamana ihany koa izahay izay azo aseho alohan'ny hijeren'ny olona sary vetaveta, toy ny fampitandremana amin'ny fonosana sigara. Misimisy kokoa momba an'ity amin'ny zavatra manaraka etsy ambany.
Mpianatra avy amin'ny University of Edinburgh's College of Art dia nanao fampisehoana manokana ho an'ny The Reward Foundation tamin'ny volana aprily. Ao anatin'ny ezakay hampahafantatra ny momba ireo fanamby mahazo ny fiarahamonina ankehitriny amin'ny fampielezana sary vetaveta be dia be, dia tonga ny hevitra fampitandremana momba ny fahasalamana amin'ny fanombohan'ny fotoana mamoafady, mitovy amin'ny fampitandremana momba ny fahasalamana amin'ny fonosana sigara. Mba hampandrosoana ity hevitra ity dia faly izahay fa nanana fotoana nihaonana tamin'ny mpianatra mpamorona sary ao amin'ny College of Art of University of Edinburgh. Ny tanjon'izy ireo dia ny hamorona sarimihetsika 20 ka hatramin'ny 30 faharoa izay azo ampiasaina amin'ity fomba ity. Tetikasa iray izay tafiditra tao anatin'ny asan'izy ireo ary nandeha am-pientanam-po tokoa izy ireo.
Ny valiny dia nifoka rivotra. Voninahitra ho antsika ny asaina hipetraka amin'ny fetiben'ny sarimihetsika tsy miankina miaraka amin'ireo fanehoan-tenan'i 12 avy amin'ireto mpianatra tena mahay mamorona ireto. Ny fahasamihafana sy ny fiantraikany dia goavana. Faly izahay avy eo nampiseho ny enina tamin'ireo nihoatra ny solontenan'ny 200 tao amin'ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka momba ny fanararaotana ara-nofo tany Washington izay nahitàna azy ireo tamim-pitiavana. Ny sasany amin'ireo mpanao politika sy mpanao politika dia naniry ny hanaraka ity asa ity.
Mary Sharpe dia niverina Nolan Live ao amin'ny BBC Northern Ireland amin'ny 7 martsa 2018. Ny rohy dia hitondra anao amin'ny horonan-tsary feno amin'ity ampahan'ny seho ity. Niady hevitra momba ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana amin'ny zaza i Stephen Nolan mpampiantrano, miaraka amin'ny mpikatroka pôrnôgrafia ary mpidoroka sary vetaveta indray.
Araka ny voalaza tamin'ny gazetim-bolana teo aloha, tamin'ny taona lasa, ny tale jeneralinay Mary Sharpe dia voatendry ho mpiara-miasa amin'ny CYCJ monina ao amin'ny University of Strathclyde ao Glasgow. Faly erỳ izy nanolotra ny kabariny ho an'ny vehivavy "Ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny aterineto eo amin'ny atidohan'ny adin-tsaina" mandritra ny fihaonany isan-taona momba ny lohahevitry ny Zavamaniry manga sy fonosana fonja. Nitranga tamin'io andro io ihany ny hetsika Nolan Live TV tao Belfast.
Ireo sary avy amin'ny fampisehoana rehetra dia misy Eto ary ny lahatenin'i Mary dia manomboka amin'ny P.85-farany. Fotoana tena tsara hihaonana sy hizarana hevitra amin'ireo mpikaroka sy mpitsabo hafa izay tafiditra lalina amin'ny fandalinana ny fitsarana heloka bevava any Ekosy ankehitriny.
Faly izahay manambara ny pejy Facebook -nay vaovao izay mifantoka amin'ny atrikasa ampianarinay sy ireo hetsika hafa izay asehonay. Aza misalasala mandefa rohy mankany aminay Eto.
Azonao atao ihany koa ny mahaliana ny lahatsary kely vitsivitsy izay azontsika amin'ny vaovao fantsona YouTube. Betsaka ny lahatsary vitsivitsy ahatongavana amin'izao fotoana izao rehefa manana drafitra hanovana ireo dinidinika maro izay nosoratanay manerana izao tontolo izao izahay amin'ny manam-pahaizana.
Ny herinandro lasa dia fifandraisana fiantrana mitantara niantso ho an'ny NHS mba hanao bebe kokoa ny fanampiana amin'ny enta-mavesatry ny olona mitady fanampiana amin'ny "fiankinan-tena". Tsy nampoiziny ny nahita ny tatitra nataon'ny BBC sy ny fampahalalam-baovao hafa mifantoka amin'ny 'fiankinan-doha amin'ny firaisana ara-nofo' toy izany, izany hoe fitondrantena mampihetsi-po amin'ny olon-kafa, fa tsy mijery vetaveta amin'ny filozofia sy masturbation. Hatramin'ny fahazoana midadasika mora kokoa ho an'ny pôrnôgrafia dia nanjary maimaim-poana sy nahazoana maimaim-poana tamin'ny alàlan'ny Broadband sasany 10 taona lasa izay, ny fampiasana sary vetaveta dia kely sy voasokajy amin'ny fampiofanana momba ny fanabeazana ara-pananahana ho toy ny 'fiankinan-dohan'ny firaisana ara-nofo'.
Na izany aza, ny fampifangaroana ny fiankinan-doha amin'ny filan'ny nofo sy ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia ankehitriny dia tsy mety intsony, ary tsy ny kely indrindra amin'ireo tanora mpidoroka pôrnôgrafia ankehitriny no virijina. Misafotofoto ihany koa izay araraotin'ny mpandinika ny firaisana ara-nofo. Misafidy ny tsy hiraharaha ny siansa mihombo izy ireo ary manizingizina noho ny antony ara-politika fa tsy misy ny atao hoe fiankinan-doha amin'ny filan'ny nofo na ny filokana. Natodin'izy ireo ho an'ny olo-malaza toa an'i Harvey Weinstein na i Tiger Woods fa ny fialan-tsinin'ny mpanankarena amin'ny fihetsika ratsy fotsiny. Na izany aza dia nazava tamin'ny taratasy fikarohana 3 farafaharatsiny tao amin'ny kaonferansa ICBA fa ny ankamaroan'ny olona manana aretina mamoa fady dia manana olana amin'ny fampiasana pôrnôgrafia an-tsokosoko, fa tsy mankany amin'ireo mpanao firaisana na toy izany.
A fifanarahana ny manam-pahaizana mitarika ao amin'ny Lancet tohano ny sokajy diagnostika vaovao an'ny '', izay hisy ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia sy ny fiankinan-doha amin'ny firaisana ara-nofo, ho fampidirina ao amin'ny fanontana Iraisampirenena momba ny aretina fanontana iraisana faha-11 an'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny aretina. Rehefa navoaka io dia hovahana io fikorontanana niniana natao io.
Misy ny mandresy lahatra fa ny fahafahana miditra amin'ny fampirisihana an-tsokosoko amin'ny alàlan'ny finday smartphone amin'ny tanana dia mitarika mora kokoa amin'ny fampiasana fitaovam-pihetseham-po noho ny fitadiavana ny mpiara-miasa amin'ny tena fiainana ary avy eo miezaka ny hiara-hiditra amin'izy ireo amin'ny firaisana ara-nofo. Manao izay tsara indrindra vitantsika isika mba hanampy amin'ny fanabeazana ny mpanao gazety eto amin'ity faritra ity.
Ity lalàna vaovao ity dia manomboka manan-kery manomboka amin'ity taona ity. Lahatsoratra bilaogy tena tsara sy mazava avy amin'ny namantsika John Carr dia milaza ny antony nahatonga ity fandrosoana lehibe sy mahomby ity ho an'ny ankizy ao Angletera.
Amin'ny maha-fiantrana izay manana fifandraisana feno fitiavana eo am-pelatanan'ny zavatra ampianarintsika, mihevitra isika fa ny filazana fotsiny ny fandosiran'i Kenneth John sy i Doris Ivy Mead, ireo ray aman-drenin'ireo mpanorina ny Darrel Mead, The Reward Foundation. Faly izahay fa niaraka tamin'izy ireo tany Aostralia mba hankalaza ny tsingerin-taonan'ny 74th tamin'ny 19 Febroary tamin'ity taona ity. Telo herinandro taty aoriana ihany anefa dia nodimandry i Ken tamin'ny torimasony nandritra ny taonan'ny 94 taona. Dot, 93, vehivavy iray niaina tamin'i Ken, dia nodimandry mangina nandritra ny alahelony alakamisy lasa teo, herinandro 8 hatramin'ny ampitso taorian'ilay malalany. Nilaza taminay izy fa tsy afaka mitondra fiainana tsy misy azy.
Tombontsoa lehibe ny fahafantaran'izy ireo azy roa, nahita fiahiana tamim-pitiavana sy fanoloran-tena tao am-pony ary koa nankafiziny fotsiny ny orinasa mahafinaritra sy manohana azy ireo. Tsy ho hitantsika ny fijerin'i com's comic sy ny fiverimberenan'ny fehezanteny, ary ny halavany sy ny fomba fiteniny.
Rehefa nanontaniako an'i Dot tamin'ny andro fampakarako ho an'i Darryl tao amin'ny 2012 aho, inona no tsiambaraton'ny fanambadiana sasantsasany efa ela, namaly izy hoe: "Aza miady hevitra. Tsy misy zavatra manan-danja miresaka momba ". Faly aho mampita ireo teny feno fahendrena avy amin'ny vinantovaviko malala izay tena tia sy be fitiavana tokoa. Tsy dia tsara lavitra noho izany izany.
The Potato Melting, 5 Rose Street
Ianao dia afaka manavao ny safidinao or tsy misoratra eto amin'ity lisitra ity.